शेयर बजार प्रवेश कति सुरक्षित कति असुरक्षित - Rastrakokhabar
शेयर बजार प्रवेश कति सुरक्षित कति असुरक्षित
२० माघ २०७७, मंगलवार २०:४६
अन्तर्वार्ता / विचार, आर्थिक, मुख्य समाचार
हाल आएर शेयर बजारमा ह्वात्तै लगानीकर्ता बढेर गएका छन् । सरसर्ती हेर्दा यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ने हुन्छ । विगतको झन्डै ३ दशक लामो शेयर बजारमा सुरूका दिनहरू खासै यसमा सक्रियता बढ्न सकेको थिएन । जोकोहीले यसलाई राम्रोसँग बुभेका पनि थिएनन् र केही बुझेकाहरूले पनि शेयरमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल पाएका थिएनन् । त्यसैले यसमा त्यति रूचि बढ्न नसकेको सबैको बुझाई छ ।
के शेयरबाट आप्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ त ? यसमा फरक–फरक धारणा आउने गरेको छ । साथै शेयरमा रूचि बढाएर लाग्नेहरूका लागि पनि कहिले के कहिले के जस्तो समस्याहरुले पीडित नै बनाएको छ । यस्तो हुनुमा सरोकारवाला निकायले पनि वास्तविक समस्याको पहिचान नै नगरिकन आप्फना अनुकूल नयाँनयाँ नीतिनियमहरू ल्याइदिनाले जहिले पनि चलाक लगानीकर्ताहरूकै पक्षमा फाइदा पुग्ने भइरहेको छ । कहिले पनि सरकारी निकायले यसलाई सर्वसाधारणको हितमा हुनेखालको नीतिनियम बनाएको पाइएन ।
शेयर बजारमा एक्कासी किन यसरी सर्वसाधारणको रूचि बढ्यो त ?
हालै विश्वमहामारीको रूपमा कोभिड–१९ ले आक्रान्त बनाएको छ । यसमा नेपाल पनि अछूतो रहन सकेन । यस्तो अवस्था भइरहँदा देशका ठूलाठूला उद्योगधन्दा, व्यवसाय एवं बजारले गतिलिन नसक्दा कैयौँको रोजीरोटी गुमेको हामीले भोग्नु सुन्नु पर्यो । यस्तो अवस्थामा मानिसमा आयस्रोतको कमी भइरहँदा धेरैले शेयरबजारलाई पनि कमाईको माध्यम बनाउन पनि सक्रियता बढाएको पाइएको छ । धेरैले यसको वास्तविकतालाई बुझदै नबुझी होमिएको पाइयो । तर यसलाई नजिकबाट जसले बुझेका छन् उनीहरूका लागि त फाइदैको कुरा हो यसमा खेल खेल्न जान्ने लगानीकर्ताहरूका लागि त फाइदा नै हो तर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले यसबाट के कस्तो फाइदा पाउने हुन् उक्त कुरा धेरैले नबुझेर होमिएका छन् ।
शेयर बजार भनेको के हो त ?
शेयरमा लगानी गरेर फाइदा पाउने व्यवस्था भएअनुसार देशले लगानीकतार्हरू लाई फाइदा पुगोस भन्ने उद्देश्यले सरकारी तवरबाट यसको व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा सरकारी संस्थानहरुले पनि यसमा सहभागिता जनाएका थिए । हाल आएर जम्माजम्मी चारवटा कम्पनी यसमा रहन सफल भएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल टेलिकम, विशाल बजार कम्पनी, नेपाल पुनर्विमा कम्पनी रहेका छन् । यी मध्ये सबैभन्दा राम्रो प्रतिफल दिनेमा नेपाल टेलिकम रहेको छ ।
हामीले सर्वप्रथम बुभनुपर्ने पर्ने कुरा के हो भने शेयर बजार भनेको देशमा सञ्चालित ठूलाठूला उद्योग, व्यवसायलाई सर्वसाधारणको पनि लगानी गर्नका लागि सरकारी नीति अनुसार उक्त उद्योग, व्यवसायमा सर्वसाधारणको पनि ३० प्रतिशत पूँजी लगानी गर्ने नीति बनाइएको छ । जसले सवर्साधारणले गरेकै लगानीले पर्याप्त पुँजी एकत्रित भएर लगानीलाई ति उद्योग, व्यवसायले वार्षिक रूपमा कमाएको पुँजीबाट लाभांश दिने गर्छन् यसलाई हामी शेयरबाट प्राप्त आम्दानी भनेर बुझ्रने गरेका छौँ । वार्षिक आम्दानीबाट साधारणसभाले निर्णय गरेर लगानीकर्तालाई लाभांश स्वरूप नगद या थप शेयर संख्या दिने गरेका छन् । त्यो नै हो सर्वसाधारणका लागि हुने आम्दानीको बाटो ।
नयाँ लगानीकतार्हरूका लागि जान्नै पर्ने
सर्वप्रथम शेयरमा लगानी गर्ने अवसर भनेको सरकारबाट अनुमति लिएर सर्वसाधारणहरुका लागि लगानी गर्न पाउने प्रथम बजार हो भने शेयर सदस्य यकिन भइसकेपनि पुँजी बजारमा सूचीकृत भइसके पछि भिन्दा भिन्दै दरका शेयरहरु बिक्रीका लागि राखिएको हुन्छ जसलाई जानेर बुझेर मात्र उक्त शेयर खरिद बिक्री गर्ने गरेका हुन्छन् जसको जोखिम कायम नै हुन्छ । विस्तारै विस्तार यो बजारको गतिविधि बुभ्mदै जाँदा केही हकसम्म प्रवेश गर्न सकिन्छ । तर यसमा निकै सावधानी अपनाएर मात्र दोस्रो पुँजी बजारमा सामेल हुनका लागि अनुभविको सल्लाह र सुझाव लिएर मात्र यसमा प्रवेश गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
शेयरमा कस्ता पुँजी लगानी गर्ने हो भन्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । आपूmले कमाएको प्राप्त धनबाट बचत गरिएको मध्ये केवल १० प्रतिशत रकम यसमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जुन कुनै पनि जोखिमले आफूलाई संकटमा नपुराओस् । शेयर लगानीमा पहिलो बजार सुरक्षित भए पनि विगतको अवस्थालाई ध्यान दिने हो भने उक्त कम्पनीले राम्रो मुनाफा दिन नसके शेयरको वास्तविक मूल्यभन्दा बजार मूल्यमा आकाश–पातालको फरक हुने गरेको, कम्पनीका आधारभूत कुराहरू तथा देशको आर्थिक अवस्थाको सेयर मूल्यमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने भनाईहरू पनि बजारमा बारम्बार आउने गरेका छन् । तर यसमा पूर्ण सत्यता भने पाईंदैन । यसैगरी कम्पनीका वित्तीय अवस्थाको प्रभाव पनि शेयर बजारमा त्यत्तिकै रहेको पाइन्छ । यी तथ्यबाट नेपालको सेयर बजार पनि प्रभावकारी भएर बजार विस्तार भएर अगाडि बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
सिलाई पेसा अपनाएकी मनग्य आम्दानी गर्ने महिला सिधै दोस्रो बजारमा प्रवेश
हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै माध्यम भएर नै बजार प्रबेश भएको पाइन्छ। सबै जना जानेर बुझेर बजारमा प्रवेश भएको पाईदैन। भर्खर बजारमा प्रवेश गर्नेहरुले प्रायः साधारण शेयरबाट सुरुवात गरेको पाउछौँ र राम्रो पनि हो । तर बिरलै लगानिकर्ता दोश्रो बजार प्रवेश गर्ने आट गर्छन । एक जना महिला, काठमाण्डौ, सितापाईला रामकोट निवासी मेनुका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । जो आफ्नै पेशा (टेलर) बाट मनग्य आम्दानि गर्दै थिईन, खै अस्ति के झोक चलेछ एक्कासी बिहानै कारोबार खुल्नु भन्दा अगाबै ब्रोकर अफिस पुगेर, फोन गर्दै थिईन- शेयर उठाउदै रे (जीवन मै पहिलो पटक) यो भन्दा अगाडि उहाँसँग कुनै कम्पनीको शेयर छैन र अनुभव पनि थिएन ।
सिधै दोस्रो बजारमा प्रवेश त्यहि पनि “N” कम्पनी (नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नबिल बैंक) तर संजोग ति महिलाको कम्पनी छनौट राम्रो पनि पर्यो, ऊहाँको रोजाई पनि एउटा कम्पनीको मात्र रहेन बिभिन्न कम्पनीको शेयर छनौट भएको रहेछ । अनि शेयर मूल्य पनि राम्रो, अहिले बजारमा पनि राम्रो मूल्यमा खरीद बिक्री, अनि बोनस दर पनि राम्रो छ । दोस्रो बजारबाट बजार प्रवेश गर्नु भएको ति महिला अहिले कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर साधारण शेयरमा पनि नछुटाई लगानी गर्नु हुन्छ । भखर्रै मात्र बाड्फाड भएको पुर्बाधार बैंकको साधारण शेयरमा उहाँको ५० कित्ता शेयर परेकोमा खुसिले गद्गगद हुनुहुन्थ्यो । कारण जीवनकै पहिलो पटक आईपीयो परेको थियो । त्यही पनि ५० कित्ता । भर्खर भर्खर बजारमा प्रबेश गर्नु भएकाले साधारण शेयर पर्दा धेरै ख़ुशी ब्यक्त गर्नु भएको छ । अहिले उहाँ दिनै पिच्छे आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्दै दङ्ग पर्नु हुन्छ । टेलर ब्यबसाय सँगैसँगै शेयर बजार पनि आकर्षण हुँदै गएको ऊहाँ भन्नुहुन्छ । बिभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाईन मिडिया, सामाजिक सन्जाल मार्फ़त सूचना तथा जानकारी बटुलेको स्वयं मेनुका बताउनुहुन्छ । अहिले बिस्तारै ऊहाँ अरुलाई पनि बजार प्रबेश गर्नु भन्दा पहिले केही बुझेर मात्र प्रबेश गरी कारोबार गर्दा खालि हात फर्कनु पर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिई सुझाउनु हुन्छ ।
Previous Post	आफूमाथि कुटपिट र गालीगलौज भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिन पुगिन् सुष्मा